Umuthi wokugoma usendleleni eya kubasebenzi bezempilo baseNingizimu Afrika | Scrolla Izindaba
Umuthi wokugoma usendleleni eya kubasebenzi bezempilo baseNingizimu Afrika
Uhulumeni uyaxakeka ufuna ukuvala ukugxekwa okukhulu ngokuthi wehlise izwe ngohlelo lokugoma.
UNgqongqoshe Wezempilo uZweli Mkhize umemezele esidlangalaleni ngesivumelwano semithamo eyisigidi yomuthi wokugoma i-AstraZeneca – eshibhile ekhona – kule nyanga, kanye no-500,000 owengeziwe ngoNhlolanja.
Lezi zindaba zifika ngemuva kokuthi uhulumeni ebhekwe ngabomvu ngokwehluleka kwakhe ukuthola imigomo.
Sekuze, kube manje, kuncike ohlelweni lwe-Covax, oluhlose ukuhlinzeka ngemithi yokugoma emazweni ampofu omhlaba kodwa kungenzeka lungatholakali izinyanga ezimbalwa okungenani.
Ngenkathi inqwaba yamazwe athuthukile emhlabeni eseqalile ukukhishwa kokugoma, uhulumeni waseNingizimu Afrika ubhidlikile wabe esehluleka ukuchaza ngokuntuleka kwabo kwenqubekela phambili.
Namuhla, ekugcineni, lokhu sekuguqukile.
UMkhize umemezele ukuthi lesi sivumelwano, esishaywe yi-Serum Institute ye-India (i-SII), sizohlinzeka ngemithi yokugoma yabasebenzi baseNingizimu Afrika nabangasese abasemazingeni aphansi abayi-1.25.
Kulesi simemezelo, uNgqongqoshe Wezempilo okhululeke waqinisekisa izwe ngokuphepha komuthi wokugoma i-AstraZeneca, echaza ukuthi “usuvele uvunyelwe abalawuli abahlukahlukene futhi uyasatshalaliswa nakwamanye amazwe.”
Yize ochwepheshe bebungaza lokhu kuthuthukiswa njengesinyathelo sokuqala esamukelekile ekulweni ne-coronavirus, baxwayise ngokuthi ngeke kwanele ukunqoba igciwane.
Njengoba ukwehluka okusha kuqhubeka, iNingizimu Afrika isibe yizwe elishayeke kakhulu kuleli zwekazi.
Mhla ziyisithupha kuMasingana kwabonwa irekhodi lokushona kwabantu abangama-844 okwabangelwa yi-Covid-19, kwaletha inani elifinyelela eaibalweni esiyi-31,368.
Ochwepheshe njengamanje bakholelwa ukuthi abantu abangama-67% bezwe bazodinga ukugonywa ukuze kuzuzwe umhlambi wokuzivikela kuleli gciwane.
Izindaba zanamuhla ngokuqinisekile ziyisinyathelo sendlela efanele, kodwa okuningi kakhulu kuzodinga ukuthathwa ukuze kunqotshwe igciwane.